Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus
Paul Aparicio | | Birao hafa, Ubuntu, Xubuntu
Manohy ny fampianarana ataontsika hametrahana ireo tsiro Ubuntu, anio dia tsy maintsy ataontsika ilay manazava Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus. Xubuntu dia mampiasa tontolo manodidina ny sary Xfce, izay midika fa rafitra fandidiana mailaka izy amin'ny fotoana mahamety azy. Solosaina iza no hatolotro anao ho Xubuntu? Eny, ho an'ny solosaina manana loharanom-bola voafetra, saingy tsy dia afaka mametraka rafitra fandidiana mamela ny fanovana hatao ianao.
Tokony hiaiky aho fa ny sary Xubuntu dia toa fotony ho ahy, amin'ny lafiny iray mitovy amin'ny Lubuntu, fa tsy toy ny kinova LXDE, fanovana maro no azo atao mora foana toa ny ataontsika ao amin'ny Ubuntu MATE izay tiako be. Tahaka ny efa nataontsika tamin'ny lahatsoratra hafa, dia hanolotra zavatra roa izahay hanamboaranay ny rafitry ny fandidiana araka izay itiavanao azy indrindra.
1 Dingana sy fepetra takiana mialoha
2 Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04
3 Inona no hatao aorian'ny fametrahana Xubuntu 16.04
3.1 Mametraka sy manaisotra fonosana
3.2 Manampia mpandefitra manokana
Dingana sy fepetra takiana mialoha
Toy ny mahazatra dia manohy manazava ny dingana sasantsasany izay mendrika hatao izahay ary inona no hatao raha hametraka Xubuntu na fizarana hafa miorina amin'ny Ubuntu:
Na dia tsy misy olana aza matetika, nomanina ho solon'izay amin'ireo tahirin-kevitra manan-danja rehetra mety hitranga.
Pendrive no ilaina USB 8G (maharitra), 2GB (Miaina fotsiny) na DVD hamoronana USB Bootable na DVD mivantana izay hametrahantsika ny rafitra.
Raha misafidy ny safidy natolotra ianao hamoronana USB Bootable, ao amin'ny lahatsoratray Ahoana ny fomba hamoronana USB Ubuntu azo entina avy amin'ny Mac sy Windows manana safidy maromaro ianao izay manazava ny fomba famoronana azy.
Raha mbola tsy nanao an'io ianao dia mila miditra amin'ny BIOS ary manova ny filaharan'ny singa fanombohana. Soso-kevitra ny hamakianao aloha ny USB, avy eo ny CD ary avy eo ny kapila mafy (Floppy).
Raha te-hilamina ianao dia ampifandraiso amin'ny solosaina ny solosaina fa tsy amin'ny Wi-Fi. Milaza an'io foana aho, saingy satria tsy mifandray tsara amin'ny Wi-Fi ny solosainako mandra-panovako azy. Raha tsy mampifandray azy amin'ny tariby aho dia diso ny misintona ireo fonosana eo am-pametrahana.
Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04
Tsy toy ny fizarana hafa, rehefa mivoaka avy amin'ny DVD / USB Bootable miaraka amin'ny Xubuntu 16.04, dia ho hitantsika fa miditra mivantana izy io ubiquity (ny programa fametrahana). Raha te-hitsapa ny rafitra ianao dia akatony fotsiny ny varavarankely fametrahana, zavatra nataoko mba hahafahako maka ny pikantsary. Tsarovy koa izany mety hiseho ny efijery iray mangataka antsika hifandray amin'ny Internet raha tsy izany isika. Ireto ny fizotry ny fametrahana:
Safidintsika ny fiteny ary kitiho ny «Tohizo».
Ao amin'ny varavarankely manaraka dia manoro hevitra anao foana aho hanamarina ireo boaty roa ireo satria, raha tsy izany, rehefa manomboka ny rafitra ianao dia tsy maintsy manavao ary mety misy zavatra tsy mandeha, toy ny fanohanana ny fitenintsika. Manisy marika ireo boaty roa izahay ary tsindrio ny «Tohizo».
Ao amin'ny varavarankely fahatelo no hisafidianantsika izay karazana fametrahana tadiavintsika:
vaovao farany. Raha nanana kinova taloha izahay dia afaka manavao.
Esory ny Ubuntu ary avereno apetraka. Mety ho safidy io raha manana fizara hafa miaraka amin'ny Windows koa isika, noho izany ny fametrahana dia hatao eo an-tampon'ny fizarazaranay ho an'ny Linux ary tsy hikasika ny hafa.
Fafao kapila ary apetaho. Raha manana fizara marobe isika ary te hanaisotra ny zava-drehetra tsy hanana afa-tsy Xubuntu 16.04, dia tokony ho safidintsika io.
Safidy misimisy kokoa. Ity safidy ity dia tsy hamela ny famoronana, ny fanovana ny habeny ary ny famafana ny fizarana, izay mety ho mora ampiasaina raha te-hamorona fizarazarana maro (toy ny / trano na / boot) ho an'ny Linux izahay.
Vantany vao nisafidy ny karazana fametrahana isika dia tsindrio ny "Install now".
Manaiky ny fampandrenesana izahay amin'ny fipihana ny "Tohizo".
Misafidy ny faritra misy antsika isika ary tsindrio ny «Tohizo».
Misafidy ny fiteninay izahay ary tsindrio ny «Tohizo». Raha tsy fantatsika hoe inona ny fisehon'ny kitendry antsika, azontsika atao ny manindry ny "Detect layout keyboard" ary manoratra ao anaty boaty mba hahitana raha marina ny zava-drehetra.
Ao amin'ny varavarankely manaraka, hametraka ny solonanarana izahay, ny anaran'ny ekipa ary ny tenimiafinay. Avy eo dia tsindrio ny «Tohizo».
Ary farany, averinay indray ny solosaina.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Xubuntu 16.04
Mametraka sy manaisotra fonosana
Ho ahy dia fanao mahazatra izany. Ny rafitra miasa rehetra dia miaraka amin'ny rindrambaiko izay tsy hampiasainay mihitsy. Fa maninona no tadiavintsika rafi-pahazavana raha hamoaka azy io? Ny tsara indrindra dia ny famoahana ballast. Mba hanaovana izany dia sokafanay ny menio (havia havia) ary tadiavinay ny "lozisialy" hidirana amin'ny Xubuntu Software Center, izay ahitantsika ireo fonosana napetrakay ary hizahantsika raha te hamafana azy ireo izahay. Raha ny fonosana hapetrakay, eto ambany eto ianao dia misy tolo-kevitra manokana izay mitovy amin'ny notolorako tamin'ny androny ho an'ny Ubuntu MATE:
Synaptic. Mpitantana fonosana.
Shutter. Fitaovana mandroso amin'ny fakana pikantsary sy fanovana azy ireo avy eo.
GIMP. Heveriko fa be dia be ny famelabelarana. "Photoshop" be mpampiasa indrindra ao amin'ny Linux.
qbittorrent. Mpanjifa tambajotra BitTorrent.
Kodi. Ilay mpilalao haino aman-jery fantatra taloha hoe XBMC.
Aetbootin. Mamorona USB mivantana.
GParted. Ny fitaovana hamolavolana, hamerenana ny habeny ary raha fintinina dia mitantana fizarana izay tsy azoko hoe ahoana no tsy apetraka eto na amin'ny fizarana hafa.
Hafaingana radiala. Esory ny feo manga hanampy antsika hatory amin'ny alina.
Clementine. Mpilalao feo miorina amin'ny Amarok, saingy notsorina kokoa.
Manampia mpandefitra manokana
Maxim ihany koa ho ahy izany. Ny menus fanombohana dia tsy hanana zavatra tsy mety raha tsy mila mandeha an-tongotra alohan'ny fipihana ny rindranasa tiana hotanterahina. Raha tsy maintsy miditra amin'ny iray manokana im-betsaka isan'andro isika dia lasa lava io dia io, ka mendrika ny mamorona fatorana. Ohatra, mankany amin'ny menio fanombohana isika ary, raha tokony hanindry ilay rindranasa tiana hatsangana dia tsindrio faharoa ary safidintsika ny "Add to panel". Raha tsy amin'ny toerana tadiavintsika izy, toy ny nitranga tamin'ny pikantsary teo aloha, dia tsindrio azy ireo faharoa ary tarihintsika izy ireo. Raha tsy afaka isika satria misy kisary hafa manakana ny lalantsika dia tsindrio havanana ireo sary masina ireo, esory ny boaty izay milaza hoe "Sakano ny tontonana" ary, afindra isika izao.
Ny menio hitanao amin'ny pikantsary teo aloha dia ilay miseho rehefa tsindrio faharoa eo amin'ny tontonana ambony. Raha te hanampy singa vaovao isika, toy ny hitsin-dàlana amin'ny baiko "xkill" (izay nampiasako teo am-panoratana ity lahatsoratra ity) hanakatonana ireo rogue logiciel, hataontsika amin'ny fipihana tsara sy fisafidianana Panel / Manampia singa vaovao ...
Efa nametraka Xubuntu 16.04 ve ianao? Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Fitsinjarana miorina amin'ny Ubuntu » Xubuntu » Ahoana ny fametrahana Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus
Nampiasa Xubuntu nandritra ny herintaona mahery aho ary tiako izany, rehefa nivoaka ny kinova 16.04 dia nametraka azy aho.
Tsy azoko atao ny miasa ny mpizara SAMBA, misy mahalala ny fomba hanaovana azy na ny solony?
Tsy mandeha tsara ho ahy koa ilay rindranasa Bluetooth.
JADE (Outra Jade izay tia BTS koa) dia hoy izy:
Tena nankasitrahako. = D
Valio amin'i JADE (Outra Jade izay tia BTS koa)
Joshua Cuadros dia hoy izy:
misy birao miasa amin'ity distro ity?
Valiny tamin'i Josue Cuadros
baetulo dia hoy izy:
Nametraka xubuntu aho tamin'ny milina faniriana 3000 taloha. Miasa tsara ho ahy ny zava-drehetra afa-tsy ny fikirakirana ny efijery izay manaiky ny fehin-kevitra 800 × 480 farany ambany ihany. Nikaroka vahaolana hatraiza hatraiza aho ary tsy misy fomba ahafahako manova azy. Mazava ho azy fa mivoaka eo amin'ny efijery ireo sary.
Misy fanampiana azafady !!
Mamaly an'i baetulo
David G. dia hoy izy:
Tsy haiko raha nahatsikaritra izany izy ireo, fa ny fizarana dia XXX (Xubuntu Xenial Xerus)
Valiny tamin'i David G
Angel Rodriguez Rodriguez dia hoy izy:
Angel, tiako Xubuntu 16.04, saingy misy zavatra tsy vitako amin'izany, ny tsy afaka mandoro CD na DVD, ka tena tiako ilay izy raha misy mahalala ny fomba hakana ahy hanoratra sy hamafana izay voarakitra mba hampiasa DVDSW rewritable dia hankasitraka azy io tokoa.
Salama mafana ho an'ireo tia Linux amin'ny ankapobeny.
Valiny tamin'i Angel Rodríguez Rodríguez